uBlock, enye indlela ekhululekile futhi elula kakhulu ye-adBlock Plus | Kusuka kuLinux
uBlock, enye indlela ekhululekile futhi engasindi kakhulu ku-adBlock Plus
U-Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Aplicaciones, Kunconyiwe
1 Yini uBlock?
2 Ukusebenza kwe-UBlock
3 Ukufakwa kwe-UBlock
UBlock Akuyona i-ad blocker nje; kungumbhali ovimbela inhloso. Ivimba izikhangiso njengoba isekela i-syntax yesihlungi se-Adblock Plus, kepha inweba leyo syntax futhi yenzelwe ukusebenza ngezihlungi nemithetho yangokwezifiso. Ngokusho kwabadali bayo, ishiya i-CPU elula kakhulu nenkumbulo yememori futhi, ngaphandle kwalokhu, ingalayisha futhi iphoqelele izinkulungwane zezihlungi ezisetshenziswa abanye abavimba abadumile, njenge-AdBlock Plus (ABP) noma iGhostery. Lezi zinhlu zifaka i-EasyList, i-EasyPrivacy, i-Malware Domains, nezinye ezikuvumela ukuthi uvimbe ama-trackers, amawijethi omphakathi, nokunye okuningi. Iphinde ilethe ukusekelwa kwamafayela okusingathwa futhi ikuvumela ukuthi ungeze eminye imithombo, ngaphezu kwale "fekthri"
UBlock usebenza kuzo zombili iChromium / Chrome nakuFirefox futhi, ngokungafani neGhostery, usatshalaliswa kusetshenziswa i- Ilayisense ye-GPLv3, okwenza kube ithuluzi le- software free. Ngenkathi iGhostery isebenza kahle kakhulu, akuyona kuphela isoftware yamahhala kepha ikhona izinsolo ezinzima ukuthi ngomsebenzi we- "GhostRank" ithengisa idatha kwizikhangiso ezivinjiwe ezinkampanini zokukhangisa uqobo. Esikhundleni salokho, ngincoma ukuthi uzame ezinye izindlela zamahhala, njenge Khubaza o UBlock. Elinye iphuzu okufanele likhunjulwe ukuthi uBlock -njengo-ABP, i-AdGuard, nabanye abanye- bavumela abasebenzisi ukuthi bafake okokuhlunga kwabo, into engenzeki ngeGhostery noma i-Disconnect.
Kokuhlangenwe nakho kwami, selokhu ngisebenzisa uBlock, isivinini sokuphequlula sithathe ukweqa okuphawuleka kakhulu. Futhi, amakhasi ewebhu abukeka "ehlanzekile" futhi ngaphandle kokuqukethwe okungadingekile okungangiphazamisa. Njengokungathi lokho bekunganele, ngokungafani ne-Adblock Plus (ABP), uBlock usebenzisa izinsiza ezimbalwa kakhulu. Nawa amanye amashadi wokuqhathanisa ukufakazela lokhu.
Ukuhlaziywa kokuqhathanisa kokusetshenziswa kwememori ku-Chromium
Ukuhlaziywa kokuqhathanisa kokusetshenziswa kwememori kuFirefox
Ukuthi uBlock uyashesha futhi uyasebenza akusho lokho vimba okuncane abathungathi.
Ngokubona kwami, leli phuzu lidinga isexwayiso esifushane. UBlock akavimbi ngokuzenzakalela amanye amawijethi we-Facebook, Twitter, Google+, njll. ukuthi ezinye izandiso ziyavimba. Ngalokhu, kuyadingeka ukusebenzisa ezinye izihlungi ezivela eceleni (esezitholakala eBlock), njenge-Anti-ThirdpartySocial noma iFanboy's Social Blocking List. Noma kunjalo, kufanele udlale ngokuzungezile ngohlu uze uthole ibhalansi oyifunayo. Enye indlela, eyinkimbinkimbi ngokwengeziwe, ukunika amandla izinketho ezithuthukile bese usetha imithetho yokuhlunga enamandla.
Ukufaka kulula kakhulu, kufanele nje ufake isandiso esihambisana nesiphequluli sewebhu osisebenzisayo.
Landa uBlock extension weFirefox
Landa isandiso se-uBlock se-Chromium / Chrome
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » uBlock, enye indlela ekhululekile futhi engasindi kakhulu ku-adBlock Plus
Ngiyabonga kakhulu, ngizozama. IFirefox yami ihamba kancane kakhulu.
Bengilokhu ngiyisebenzisa kusukela ekuphumeni kwayo kuFirefox, isebenzisa cishe lutho futhi isebenza kahle kakhulu.
Ungalandela ukuthuthuka kombhali wokuqala kwimfoloko ayenzile:
UBlock Origin, isandiso kuFirefox: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/ublock-origin/
Ungathola imininingwane eminingi ngemfoloko, phakathi kokubuyekezwa kwazo zombili izandiso, naku-wikipedia:
Kungakuhle vele, kepha ukusebenza kungaqhathaniswa kanjani nobungane nokuhlela i / etc / hosts? Lo mbhalo muhle, yize ungaqedi ama-iframes wokukhangisa, okwenza ukuthi kumakwe iphutha elingu-404.
@jorgicio Ngisebenzise isixazululo esifana nalesi osishoyo, i-modified / etc / hosts kanye ne- userContent.css ukugwema ama-iframes nanoma ikuphi okunye ukulandelwa kwezikhangiso ezivinjiwe ekhasini. Impela ukwenza izinto ezinjengalezi kuthuthukisa kakhulu ukusebenza kweFirefox. Lapha kwaLinux shicilela enye inketho enhle impela, njengoba bekukhona nefayili le- https://blog.desdelinux.net/privoxy-adblock-list-y-adios-publicidad/ futhi kukhombisile ukuthi ukusebenza kweFirefox kuthuthuke kangakanani ngaphansi kwalolo lungiselelo, okusondele kakhulu kulolo lwe-userContent.css kanye / etc / hosts.
Kepha ngingakutshela ngokuqiniseka impela ukuthi uBlock muhle kakhulu, njengamanje nginamathebhu angama-21 avuliwe kuFirefox, ama-consoles amathathu, i-vim ne-geany avuliwe nokusetshenziswa kwe-681 Mb yeRam, akukubi impela.
Lokho ngikwazile ukukubona, futhi kuyaziswa. Ngiyethemba ukuthi iyatholakala kwezinye iziphequluli, njenge-Opera 😀
Okwamanje, ngizonamathela ku-ublock ukubona ukuthi kuhamba kanjani 😀
Ngiyaziphendula: Yebo ikhona i-xD
Umnikelo omuhle kakhulu @usemoslinux, kusuka kunketho encane eyaziwayo kepha enamandla. Sekuyisikhathi eside ngiyekile ukusebenzisa i-ABP ngithanda iskripthi sokuguqula / njll / abasingathi ngisebenzisa uchungechunge lwezinhlu ezinhle kakhulu, kanye ne- userContent.css eguquliwe ukuqeda indawo emhlophe ecasulayo. Ngalokhu, izikhangiso ezithile beziphunyuka, kepha ukuthuthuka kokusebenza kweFirefox bekumangalisa.
Ngemuva kwalokho ngithole lesi sandiso ngenkathi ngithuthukisa iskripthi se / etc / hosts, Nginqume ukusizama futhi kufanele ngithi ngimangele kakhulu, sigcina izinga elifanayo lokusebenza njenge userContent.css futhi sithuthukisa ukuvimba isikhangiso okuningi, kanye nokuba lula ukukuguqula kube mhlophe noma ukufaka izinto ezintsha, kuhle kakhulu.
Kufanele kucaciswe ukuthi kukhona "uBlocks" ababili. Leyo abayinikeze isixhumanisi kunothi iyafana naleyo engiyisebenzisayo, i- "Umsuka" okuqhubeka konjiniyela woqobo kuphrojekthi yakhe, ngemuva kokunikela komunye unjiniyela umthwalo wokugcina igatsha eliyinhloko le- Iphrojekthi kaBlock.
Kwakunezinto eziningana ezixakile lapho, ngoba ngakolunye uhlangothi unjiniyela wokuqala wathatha imfoloko yephrojekthi yakhe ayiphathisiwe wayithuthukisa futhi wayigcina kahle kakhulu. Abanye onjiniyela bangena engxabanweni enkulu ngezinkinga ezahlukahlukene, futhi baba abangathandeki kubasebenzisi abaningi be-blocker.
Ngamafuphi, qaphela lapho bekhetha. UBlock Origin nguye okufanele bayisebenzise, ​​njengoba kunconyiwe kunothi. Ngiyisebenzisa cishe kusukela osukwini okuphume ngalo imfoloko futhi ngaphandle kwezinkinga.
Ngaphezu kwalokho, ngisebenzisa i-Privacy Badger ukugwema ukulandela umkhondo nokulandela umkhondo enganikwa khona yiGhostery ngaleso sikhathi, engayeka ukukusebenzisa ngenxa yezizathu ezifanayo ezibalulwe kunothi.
Encwadini eku-chrome imvelaphi, kepha i-firefox enye i-xD
lokho kungumsuka we-firefox.
Siyabonga ngokucaciselwa. Njengoba ngishilo kokunye ukuphawula, ngesikhathi sokubhala i-athikili bengingazi ukuthi kukhona ublock kanye nemvelaphi ye-ublock njengamaphrojekthi ahlukile. Kunoma ikuphi, manje zonke izixhumanisi ezikule ndatshana zikhomba izandiso zoqobo lweBlock, okuyizona okwamanje ezisekelwa ngumbhali wokuqala.
Ngokwami, izikhangiso azinandaba, kepha ukulandelela kuyangikhathaza. Ungancoma ukuthi usebenzise i-Privacy Badger ndawonye ne-Disconnect? Noma okunye?
Sawubona, ngisebenzisa i-Privacy Badger futhi ngiyithanda kakhulu indlela esebenza ngayo ukuvimba ukulandela umkhondo.
Njengoba kushiwo, iGhostery ayiwona umthombo ovulekile futhi kunezinsolo eziningi ukuthi ivimba ngenkathi ithumela idatha ezinkampanini.
Endabeni ye-Disconnect, ngiyisebenzise isikhashana futhi isebenza ngokufana neGhostery. Unohlu lwama-trackers aluvimbayo futhi olugcina lubuyekeza. Anginaso isiqiniseko sokuthi ngumthombo ovulekile noma cha, kepha ngayeka ukuwusebenzisa ngoba awuzange ungikholise futhi uGhostery wasebenza kangcono.
Manje, njengoba bengifuna okuthile Umthombo ovulekile, ngiseshe ngathola i-Privacy Badger. Ngiyacacisa ukuthi kusebenza ngendlela ehlukile kuneyangaphambilini engu-2. Ngokuzenzakalelayo ayivimbeli kepha ifunda njengoba uyisebenzisa futhi upheqa ukuthi yibaphi abalandeli okufanele bavimbe noma cha.
Uma unesifiso sokusebenzisa (ngenxa yezizathu zokuphepha ukuthi ngeke baphinde badlale ngemuva kwakho) yonke imithombo evulekile, i-Privacy Badger kufanele ibe enye yezindlela ezingcono kakhulu. Futhi yisebenzise yodwa, kanye ne-Disconnect ne-Ghostery yenza okufanayo.
Njalo ngeposi elisebenzayo, ngiyabonga uPablo.
Kukwenze ngcono ukusebenza kwami ​​kuFirefox kabili.
Ngaphandle kwalokho, ifayela lokusingathwa ku-winXP naku-linux lifana kakhulu, licishe lifane
Ubuyekeze lapha: http://winhelp2002.mvps.org/hosts.htm
Ngemiyalo yeWindows neLinux, azidingekile kepha ukuze kungabikho ukungabaza.
UPaulo Zuniga kusho
Siyabonga ngolwazi. Ngisanda kudicilela phansi i-adblock futhi manje nginalesi simanga. Isebenza ngo-100% ku-safari.
Phendula uPaulo Zúñiga
wow, ngiyabonga kakhulu ngokuncoma lesi sengezo.
Kumakhompiyutha ami bengisebenzisa i-ABE, kepha lapho inketho yezinqubo eziningi zeFirefox Dev iphuma, yeka ukusebenza ngakho ngancamela ukuyeka ukusebenzisa inqubo eningi ... kepha lokhu kubonakala kusebenza kahle ... 🙂
Bengisebenzisa i-Adblock Plus isikhathi eside.
Ngifakele uBlock Origin futhi kubonakala ngathi ithuthuka kancane, ikakhulukazi kwi-laptop yami, esivele isiyi-age. Angiqapheli okuningi etafuleni langemva kwesidlo.
Enginakho kuyinto yokuxakaniseka enamagama amaningi afanayo uBlock, uBlock Origin, µBlock ...
Ngibeke uBlock Origin, kepha iqiniso ukuthi bengingazi ukuthi yikuphi okungcono ukufaka.
Ngifundile kumazwana uSergio S ancoma uBlock Origin, kepha ngifunde nezindawo lapho bancoma khona u-µBlock kanye noBlock, ngisho nangezinkomba ezididayo ezikhuluma ngento eyodwa nokubeka izixhumanisi kwenye, empeleni, lo mbhalo ofanayo ukuxhumanisa UBlock kuFirefox nakuBlock Origin for Chrome.
Ngaphandle kokusho ukungcola, angazi nakancane ukuthi la magama ahlukahlukene afani, kepha uma othile ebekwazi ukubeka i-oda elincane futhi akucacise lokhu kancane, ngingakuthokozela.
Ngiyabonga, noma kunjalo.
Iqiniso ukuthi ngesikhathi sokubhala le ndatshana, bengingazi ngobukhona bukaBlock noBlock. Kunoma ikuphi, ukuze kungaguquguquki, ngivele ngilungise izixhumanisi ukuze zonke zikhombe kuBlock Origin.
Kubukeka kukuhle kakhulu, kimi angidingi imisebenzi eminingi futhi ngisebenzisa iBluehell futhi isebenza kahle kimi.
Njengoba ngibona ukuthi ublock uyatholakala kuFirefox ngizoyisebenzisa. Kuyizindaba ezimnandi ukukwazi lokho. Ngendlela engithumela ngayo i-ABE ukuthi indize ngoba ingiphatha ngendlela ecasulayo ngoba ifaka ezinye izinto ngaphandle kwemvume yami, ikakhulukazi ebonwa kwi-laptop yentombi yami. Nokuthi ngiyifakile ngicabanga ukuthi kungcono uu
Yebo, ngiyabonga ngenothi. Ngiyithandile 🙂
Okuthunyelwe okuchaza ukumiswa okuhle kakhulu kungaba kuhle, ukuze ukwandiswa kube nakho konke ukusebenza kwe-Adblock neGhostery. Ngaphezu kwalokho, bengifuna ukubuza ukuthi ngabe kukhona owaziyo i-DoNotTrackMe manje ebizwa nge-Blur futhi ucabangani, uma inokwethenjelwa?
Kuzofanele ngiyivivinye njengokufaka esikhundleni se-Adbloc kwikhompyutha enginayo neXubuntu ene-1 Mb yememori kuphela. Ngisebenzisa iFirefox futhi kwesinye isikhathi kuhamba kancane kakhulu futhi kucishe kushayeke ngoba, kulezi zinsuku, amanye amakhasi ewebhu abeka imibhalo eminingi kangangokuba ayikho indlela yokuzulazula.
Kuhle kanjani ukuthi izivimbeli zezikhangiso zikhona, kwesinye isikhathi bekukhangiswa kuphela futhi akukho okuqukethwe obekulayishiwe 🙁
U-ER KUNFÚ WE-TRIANA kusho
AKUVIMBI konke ukukhangisa, okungenani ngeposi le-yahoo. Uma unemeyili ye-yahoo, faka ibhokisi lakho lokungenayo futhi uqaphele ukuthi ngenhla nje komyalezo wokuqala owamukelwe kunebhokisi lapho, ngezikhathi ezithile, kuvela ukukhangisa. Ngilungiselele izihlungi ngezindlela eziyinkulungwane futhi ibhokisi elinokukhangisa okujabulisayo liyaqhubeka nokuvela ngezikhathi ezithile, okungenani angazi ukuthi ngilisusa kanjani.
Phendula u-ER KUNFÚ DE TRIANA
ublock usebenza kahle ku-chroium LMDE betsy
Kuhle kakhulu, ngiyabonga ngokwabelana
U-Alfredo Bohorquez kusho
Ngikutshela ngenkinga evelile. Ngisebenzise amathuluzi okuvimba izikhangiso, njengamanje i-adblock, isikhathi eside futhi ngikuthola kuxaka ukuthi, ngokuhamba kwesikhathi, ziya ziba zincane futhi zibe wusizo olukhulu. Into enengqondo ingaba okuphambene, ukuthi bayathuthuka uma kukhulunywa ngokuvimba okuqukethwe kokukhangisa kepha amawebhusayithi amaningi ayanda lapho, une-blocker onayo, noma udla ukukhangisa noma bakuphoqa ukuthi ulayishe kabusha ikhasi ngokulenza lingasebenzi ngoba ikuthola uvimba. Bengifuna ukubuza ukuthi ngabe kukhona yini ithuluzi elisebenza ngempela namuhla lokuvimba izikhangiso. Ngiyabonga!
Phendula u-Alfredo Bohórquez
I-Remix Mini: Iphrojekthi ehlose ukuletha i-Android kwi-PC ngokuqinisekile
Nikeza i-GIMP ukubukeka kwe-Photoshop